Izizathu ezi-5 zokufunda iDegree in Social Education | Ukwakheka nezifundo
UMaite Nicuesa | 18/05/2021 08:00 | Ukuziqeqesha
El uthisha wezenhlalakahle Unguchwepheshe owenza umsebenzi obaluleke kakhulu emadolobheni nasemadolobheni. Bonke abantu babalulekile futhi ukuhlanganiswa kwabantu ngabanye kuqinisa okuhle okuvamile. Kodwa-ke, kukhona amanye amaqembu asengozini enkulu yokuthola uhlobo oluthile lokungabonakali ezingeni lomphakathi. Emphakathini wanamuhla, ngokwesibonelo, abantu asebekhulile babhekene neminyaka yokuguga ekhombisa ubandlululo oludweba isithombe esingenakwenzeka sabantu abadala.
Uthisha ubamba iqhaza ezinhlelweni ezithuthukisa intuthuko yezenhlalakahle ngokusebenzisa ubuntu. Izenzo ezenziwayo zingenziwa zifakwe ngaphakathi kwesilinganiso se- ebuntwaneni, ebusheni, ebusheni noma ebudaleni. Ungasekela namanye amaqembu asengozini. Kungani kufanele ufunde iDegree in Social Education? Ku-Training and Studies sikunikeza imibono.
1 1. Yiba umenzeli woshintsho
2 I-2 Amanani
3 3. Ukwenza ngcono izimpilo zabantu
4 I-4 Ukufunda njalo
5 5. Izindlela zokuvimbela
1. Yiba umenzeli woshintsho
Ukukhuthaza uguquko olunzulu emphakathini, kubalulekile ukukhuthaza ubuholi kumaphrojekthi alandela le nhloso. Kepha ukuguqulwa kwalezi zici akuwona umphumela wenhlanhla, kepha kuzalwa ngokuhlela. Ngalesi sizathu, kubalulekile ukulungiselela ukuxilongwa komongo wamanje ukuze uhambe endaweni oyifunayo. Uthisha wezenhlalakahle unokuqeqeshwa okudingekayo ukuze abambe iqhaza kuleli su loshintsho.
Kunezinsika ezibalulekile ukukhuthaza injabulo njengenzuzo yomphakathi. Amanani ayizimiso ezithuthukisa ukuhlala ndawonye nokuqinisa izingxoxo. Kepha, ngasikhathi sinye, kubalulekile futhi ukuthi kube khona ochwepheshe abaqeqesha abanye ngokubaluleka kwamagugu, kwesinye isikhathi, angavuselelwa. Amagugu avikela amalungelo abantu abalulekile.
3. Ukwenza ngcono izimpilo zabantu
Uthisha wezenhlalakahle ubheka ukuthi, ngomsebenzi weqembu elikhethekile, kwenzeka kanjani ukuguquka ezimpilweni zabantu abafinyelela izinsiza ezintsha. Ushintsho alwenzeki ngokushesha kepha kunenqubo yokuziphendukela kwemvelo. Lolu sizo alukhuthazi ukuthembela kepha kunalokho ukuzimela nokufukulwa kwabantu ukuthi, ngokulungiselela kangcono, ubhekane nezinselelo zansuku zonke ngamathuluzi amasha.
Umuntu ngamunye uhluke ngokuphelele futhi wehlukile, ngakho-ke, lokhu kwehlukahluka kuthuthukisa inqubo yobungcweti yalabo ababona ukuthi usuku ngalunye lwehlukile kunolwedlule. Uhambo lukathisha wezenhlalakahle alufani neze, ngoba izinqubo nezimo zikhethekile.
I-4 Ukufunda njalo
Uthisha wezenhlalo usiza abanye kepha, ngasikhathi sinye, uhlala efunda ngokuxhumana nezindaba ezimkhombisa iqiniso eliyinkimbinkimbi. Uthisha wezenhlalakahle ufunda kumandla okuzithuthukisa alabo ahamba nabo nabaqondisi.
Akubona bonke abantu abanesimo esivumayo, kodwa bonke bafanelwe ukujabula. Futhi kuyadingeka ukuthola indlela eyenza le nqubo ibe nokwenzeka. Imfundo yezenhlalakahle inikeza izimpendulo zemibuzo enenani elibalulekile lefilosofi.
5. Izindlela zokuvimbela
Uthisha wezenhlalakahle unguchwepheshe ongenelela lapho kwenzeka isimo sokuba sengozini. Ngokuzibandakanya kwakhe wenza leso sici singahlali endizeni yokungabonakali: unikeza izwi ezimweni ezidinga isisombululo esivumelaniswe nezidingo ezithile. Kepha uthisha wezenhlalo akasebenzi ngokusebenza, kepha usebenza ngokuqinile. Ngale ndlela, futhi ubamba iqhaza ezinhlelweni zokuvikela ezihlose ukuqinisa inhlalakahle yabantu bonke. Ngale ndlela, kungenzeka ukugwema ukukhishwa okungenzeka kwamanye amaqembu asengozini enkulu yokuhlupheka kulesi simo ngesizathu esithile.
Umsebenzi wothisha wezenhlalakahle ubaluleke kakhulu emphakathini wanamuhla odlula esikhathini sezinguquko nobunzima. Ngaphandle kokungabaza, lo msebenzi wobuciko obaluleke kakhulu unenani eliphakeme lobuntu.
Indlela ephelele ye-athikili: Ukwakheka nezifundo » Izaziso » Ukuziqeqesha » Izizathu ezi-5 zokufunda iDegree in Social Education